Avhareji Gunyana I. Iwo majarchas uye cantigas de amigo | Zvazvino Zvinyorwa
Unoenda izvi Chinyorwa chekutanga ichi sarja yakatsaurwa kune yedu Mabhuku eMiddle Ages. Ehe, iyo iyo rimwe zuva yatakaverenga muzvinyorwa zvemabhuku echikoro, izvo zvaive zvakatiomera kuti tinzwisise uye zvainzwika kunge zvinoshamisa. Zvakanaka, ini ndinoita yekuzviongorora-yega kurovedza muviri uye ndinotora izvo jarchas uye cantigas de amigo, ane mumiriri wepamusoro aive Galician troubadour Martin Códax. Mukupfuura ndinorangarira vashoma vakasarudzwa.
2 Nziyo dzeshamwari
Izvi nziyo dzisingazivikanwe iyo yakaonekwa mu XI-XIII mazana emakore iwo mavhesi kazhinji theme yerudo (Kunewo kurumbidzwa) kwaive munhetembo dzakakurumbira. Vakaimbwa na chivero (MaKristu aigara muhumambo hweMuslim hweAl-Andalus). Mushure me vakadzidza vadetembi vechiArab akaunganidza ivo kuti vawedzere kumagumo avo iclipusa (vakadzidza nhetembo mumutauro weArabic) sekunge vaive kwaya.
Iwo anowanzo rondedzerwa ne inzwi rechikadzi izvo zvinoratidza zvaro manzwiro e rudo kune munhu waunoda anowanzo fona Habib ("Shamwari, mudiwa" muchiArabic). Y anowanzo taura naamai vake kana hanzvadzi kubvunza kana kunyunyuta nezvekushaikwa kwerudo irworwo.
Kubva muzana ramakore rechiXNUMX neXNUMX, chiGalician-Portuguese cantigas de amigo kugovana hunhu nemajasita: naivowo nziyo dzerudo nezwi rechikadzi vari kunanga ku "shamwari" (nokudaro dhinominesheni) ravanotaura kwete nezvaamai vavo chete, hanzvadzi kana shamwari, asiwo na zvakasikwa zvinhu (mafungu, gungwa kana miti).
Uye kune mhando ina:
Akatamba: yetsika mavambo, kuratidza mufaroíkuda uye kurarama, uye vanokukoka kuti utambe.
Marinas kana barcarolas: cantigas dzinotaura nezvegungwa kana mune iyo musikana anotaura kugungwa.
Nziyo dzechiRomaía (= rudoíku): zvine chekuita neromeríace uye pilgrimages ku hermitages kana nzvimbo tsvene, uko vadikani vaiwanzosangana kana kufambidzana.
albs: vanotaura zvekuparadzanaón yevanoda mambakwedza.
Munyori akakurumbira uye mushambadzi aive muGalician Martin Códax, uyo akanyora manomwe Nziyo dzeShamwari muzana ramakore rechiXNUMX.
Chii jarchas uye cantigas zvakare vanogovana ndiyo iyo chiratidzo uye kureruka yezvinhu zvakawanda senge izvo zvemusikirwo, izvo dzimwe nguva zvine rudo kana hunhu hunokwezva. Iyi ndiyo mimwe mienzaniso:
Chii chandichaita kana chii chichava kwandiri
Anoda zvikuru, ane rudo kwazvo,
shamwari, rudo rukuru!
Maziso anopenya akarwara
uye vakakuvara zvakanyanya!
Kushungurudzika kwangu kuri pamunhu ane hasha; kana ndikaenda kunze
Ndinozozviona ndiine zvirwere
hazviite kuti ndifambe kana kuti ndinosungirwa.
Amai, ndiudzei, ndichaitei.
Apo ishe wangu, o shamwari,
ndipe mushonga wako?
Ah amai shamwari yangu
Ndiudzeiwo ndichaita sei amai
kana kusuwa kwangu kukasadzikira.
Ishe wangu Ibrahim,
oh iwe murume anotapira
Kana zvisiri, kana iwe usiri kuda,
Moyo wangu wandisiya
Ah Mwari! Ichadzoka kwandiri here?
Zvakashata (ndiko) kurwadziwa kwangu kunoshamisa
(sei) kurwara (moyo wangu), uchaporeswa riini?
Mafungu egungwa reVigo
Mafungu egungwa reVigo,
Wamuona here shamwari yangu?
Oh Mwari wangu! Ichakurumidza kuuya here?
Mafungu egungwa rakaomarara,
Wazviona here mudiwa wangu?
Wakaona shamwari yangu here
Wazviona here mudiwa wangu,
ndiani anondinetsa zvakadaro?
Tsvarakadenga hanzvadzi yangu
Hanzvadzi yangu tsvarakadenga, uya neni
kuchechi yeVigo, kune gungwa rakaomarara.
Uye isu ticha tarisa mafungu, hanzvadzi yangu tsvarakadenga, huya nokuzvidira
kuchechi yeVigo, uko gungwa rinopenga.
Uye isu tichatarisa mafungu, kuchechi yeVigo, kune gungwa rakaomarara riri,
ipapo achauya, amai, shamwari yangu
Uye isu tichatarisa mafungu, kuchechi yeVigo, uko kune gungwa rakatsamwa
ipapo achauya, amai, mudiwa wangu
Uye isu ticha tarisa mafungu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Medieval Gunyana I. Iwo majarchas uye cantigas de amigo